Arzantina: Ny Tambajotran’ny Mpampianatra · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 15 Desambra 2017 2:20 GMT
Ny tsy fahampian'ny fampiofanana ireo mpampianatra amin'ny fampiasana ny teknolojia vaovao, indrindra ireo mifandray amin'ny solosaina sy ny Aterineto no iray amin'ireo olana maha-maika indrindra amin'ny rafi-pampianarana ao Amerika Latina . Matetika dia hita fa ireo mpianatra no mahay kokoa momba ny solosaina noho ny mpampianatra azy ireo. Noho izany, tena vaovao tsara ny famoronana ny Redes Escolares (tambajotran'ny mpampianatra). Manangona ireo bilaogy tantanan'ireo mpampianatra avy amin'ny sekoly ao Buenos Aires ny tranonkala ary miara-miasa amin'ny Feevy izy ireo. Toy izao ny filazalazan'izy ireo momba ny tetikasa ao amin'ny bilaogin'ny Lisea ao Buenos Aires:
Fantaro bebe kokoa ny momba ny Weblog sobre weblogs sy ny bilaogin'i Pablo Mancini (amin'ny teny espaniola avokoa).